Kitra – «THB Ligue des champions»: hidona amin’ny Jet Mada etsy Mahamasina ny Cnaps Sport | NewsMada
Noho ny fisian’ny fifidianana solombavambahoaka, notapahina fa haroso ireo lalao tafiditra amin’ny andro fahadimy, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “THB Ligue des champions”, taranja baolina kitra.
Hotanterahina, amin’ity alarobia ity, ny andro fahadimy, hiadiana ny ho tompondakam-pirenena, “THB Ligue des champions”, taranja baolina kitra. Anisan’ny lalao andrasan’ny rehetra ny fifandonana eo amin’ny AS Jet Mada sy ny Cnaps Sport, samy avy any Itasy. Fihaonana, hotanterahina etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina.
Hatreto, hiezaka hitady fandresena ny Jet Mada na tsy manana herijika handrombaka ny anaram-boninahitra intsony aza. Hanao izay hakana, isa telo kosa ny Cnaps Sport hahatsara toerana azy ireo. Hatreto mantsy, isa fito ny azon’izy ireo.
Any Mahanjanga indray, hanafika ny Fosa Jr Boeny ao an-kianjany ny Ajesaia. Ny ekipan’i Bongolava izay vao avy resy teo amin’io kianja Rabemananjara io, ny alahady lasa teo, nandritra ny lalao manasa-dalana, niadiana ny amboaran’i Madagasikara. Hanarina ny fahavoazany amin-dry zareo tompon-jaridaina izy ireo, amin’ity.
Heverin’ny rehetra fa ho sarotra ho azy ireo ihany ny hanilika ny Fosa Jr Boeny eo an-taniny, saingy boribory ny baolina.
Any amin’ny kianja Andaboly Toliara, handray ny FC Zanakala Matsiatra Ambony ny 3FB Toliara. Hafana vay io fihaonana io satria ekipa nahavita dingana goavana ary tsy nisy nanam-po mihitsy ny 3FB, manana isa enina, hatreto, ary manana herijika handrombahana ihany koa ny ho tompondakan’i Madagasikara.
Ny lalao fahefatra amin’ity “THB Ligue des champions” ity kosa, hotanterahina rahampitso alakamisy 23 mey, eo amin’ny kianjaben’i Mahamasina hatrany. Hampiantrano ny FC Ilakaka avy any Ihorombe ny AS Adema Analamanga. Ny ekipan’ny seranam-piaramanidina Ivato izay tsara toerana ihany koa satria mitarika amin’ny isa valo. Ny FC Ilakaka izay tsy manana afa-tsy isa iray, hatreto, ary mitana ny rambony eo amin’ny filaharana.